Hot 10 SEO Tips Avy Amin'ny Semalt Islamabad Expert
Matetika ny webmasters no manao ny fahadisoana amin'ny fandaniana dolara an-jatony amin'ny dokam-barotra nokarohina indrindra indrindra ny fampiasana Pay-Per-Click alohan'ny ahafantarana fa ny ankamaroan'ny olona dia tia dokam-barotra tsy misy mpanohana. Maro ny fomba hanatrarana avo lenta amin'ny valin'ny fikarohana , saingy ireo toro-làlana folo avo indrindra amin'ny SEO dia tsy manam-potoana sy sarobidy.
Manantena izahay fa hahita ireto toro-hevitra SEO avy any Sohail Sadiq, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , mahasoa sy fampahafantarana.
Soso-kevitra 1: Fikarohana ireo kisary tsara indrindra
Azo antoka ny filazana fa ny fitadiavana ny teny fanalahidy tsara indrindra hanatsarana ny tranokalanao dia hany fomba hiverenana amin'ny aterineto. Na dia mampiasa teny fototra izay tsy ampiasaina amin'ny aterineto ianao, dia hamerina ny isan'ireo fotoana izay nandraisan'ny mpitsidika ny tranonkalanao ho an'ity tenimiafina manokana ity. Tsy maintsy mampiditra ny loharanom-baovao ianao mba hahita teny fanalahidy mety. Tsara ny mampiasa ny teny fanalahidy sy fehezanteny hampiasana ny fikarohana amin'ny fitarihana sy ny fividianana tsy misy fotoana. Azonao atao ny mividy dokam-barotra manohana anao ary mampiasa fitaovana SEO izay hanampy anao hahita ny teny fanalahidy ambony indrindra amin'ny tranokalanao.
Tondro 2: Fantaro izay ataon'ny mpandray anjara
Google, Bing, ary Yahoo dia mahafantatra fa ny rohy atsy ho atsy dia tsy maintsy ampahany amin'ny fepetrany mihetsiketsika. Noho izany, tokony hanorina rohy tsara ianao ary hahatakatra izay ataon'ny mpifaninana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fampiasana fitaovana SEO lehibe, tokony hanamarina ny sitemap azy ireo ianao ary hijery izay teny fototra nampiasainy. Fantaro ny zava-drehetra momba ny Site XML ho azy ireo amin'ny fitadiavana ny teny fanalahidy ao amin'ny anaran'ny pejy. Ankoatra izany, tokony hanamarina ny lohateniny HTML sy ny meta ianao ary hanangona lisitry ny teny fanalahidy izay nokasainy indrindra.
Soso-kevitra 3: Soraty ny votoatiny azo henoina sy azo havaozina
Ny votoatiny dia mpanjaka, noho izany dia tokony hifantoka foana amin'ny fanoratana lahatsoratra tsara ianao. Ny votoatin-javatra manerantany dia tsy afaka mamaly anao ny valin'ny faniriana ary tsy mahafinaritra ny tranokalanao. Eritrereto ny rambony fohy sy ny teny malefaka farany ary ampiasao andian-teny maromaro ao amin'ny votoatinao. Ataovy azo antoka fa ireo lahatsoratra soratanao dia manan-danja sy fampahalalana ary mahasoa ho an'ny mpamaky satria izany no hany fomba ahazoany mizara bebe kokoa, tiavo ary fanehoan-kevitra. Asio fampisehoana, ohatra, ary sariitatra mba hanaporofoana ny mombamomba anao.
Toro 4: Ampitomboy ny Lohateny sy ny Meta
Ny lohatenin'ny HTML sy meta dia tokony atao tsara kokoa. Raha te-hanatsara kokoa ny toerana misy ny tranokalam-pikarohana ianao dia tsy maintsy manatsara ny lohateninao ary mampiasa ny meta mety. ny lohateninao ary ny meta tag, ary tazony ny lohateny ambany karazan-tsoratra 60 ary mifandraika amin'ny votoatin'ny pejyo.
Andininy 5: Fanatsarana ny lohahevitra sy ny lohateny
Ny ankamaroany, ny andrana sy ny taratasy dia nosoratan'ny fitenin'ny fiteny Modern Language (MLA). Izy io dia ahitana ny pejin-pejy, ny lohateniny, fehintsoratra fohy sy lava ary ny fomba hamehezana ireo references. Toy izany koa, tokony hamaha ny lahatsoratrao amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny fenitry an'i Google. Ny lohateny dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny fandaminana ny fampahalalam-baovao, ka tokony hampiditra foana ny H1, H2, H3 ary ireo teny hafa amin'ny vatana votoaty. Tokony hanandrana hanoratra fiteny 400 isaky ny pejy ianao.
Tipa 6: Ampiasao ny toetra sy ny toetra ALT
Tokony hampiasa ny lohateny ianao, ary manintona ny toetranao hanatsara ny isa misy anao. Ny toetra anaram-boninahitra dia manambara amin'ny ankapobeny ny zavatra rehetra momba ny votoatin'ny fitaovam-pikarohana, ary ny toetoetrany alt dia manoritsoritra ny sarinao amin'ny milina fitadiavana.
Toro 7: Fanatsarana ny anaran'ny fandefasana
Raha mbola azo atao, dia tokony hamonjy ny fampahalalam-baovao, tranonkala sy sary miaraka amin'ny teny fanalahidy mety sy anaran-tsoratra. Ohatra, raha fehezanteny hoe "fanatanjahantena sy lalao" ny teny fanalahidy, dia azonao atao ny mamonjy ny sary miaraka amin'ny fanatanjahan-tena sports-and-games-00.jpg na fanatanjahan-tena sports_games_01.jpg. Milaza ny manam-pahaizana fa hanatsara ny fisainan'ny tranokalanao amin'ny anaran'ny nomerao
Toro 8: Lazao ny motera Search izay tianao index
Tsy maintsy milaza amin'ireo motera fikarohana ianao izay tena tianao hambara. Ny votoatin'ny dika mitovy sy ny sary tsy dia tsara dia tsy ho voasokajy araka ny tokony ho izy, noho izany dia afahao ity olana ity alohan'ny hamoahana Google, Yahoo, ary Bing momba ny tranokalanao. Ho an'ny tsy fitoviana, tokony hanana dikan-teny tokana amin'ny pejy rehetra ianao mba hahazoana ny rohy tafiditra ary hahazoana ireo hevitra miaraka amin'i Google.
Toro 9: Mamakia ny milina fikarohana sy ny XML Site Map
Azonao atao ny mamelona ny milina fikarohana sy ny sitemap XML araka ny zavatra takinao. Toy ny pejy tsirairay ao amin'ny tranonkalanao dia hampifandraisina amin'ny sitemapo, ahafahanao mahita ny votoatin'ny tranonkalanao. Miaraka amin'ny sitemap XML dia mora ho an'ny mpitsidika sy Google ny miditra amin'ny tranonkalanao.
Toro 10: Ampiasao ny Validator sy ny lisitra
Tokony hanamarina ny fahamarinan'ny tranonkalanao sy ny fehezan-keviny ianao. Noho izany, afaka mampiasa teknolojia SEO, CSS ary HTML ianao, ary manome antoka fa tsy misy rohy na sary tsy tapaka. Azonao atao ny manomboka ity dingana ity amin'ny alàlan'ny fanombanana ny rohy tapaka, arahin'ny fanitsiana ny mari-pamantarana ny sarintany HTML Source .